FAQs - Ek Laydhka Co., Ltd
LED guluubka nalka hore ee gaari
canbus hogaaminayo nuurka
Smd keentay guluubka
Kirii hogaaminayo nuurka
Qariyey waaya'aragnimo xenon
Xirmada diinta ka qarsoon
Waxaan leenahay alaabta kala duwan (wax soo saarka-dhamaadka sare, wax soo saarka bartamihii dhamaadka iyo soo saarka kharash-ool ah) ee suuqa kala duwan, fadlan nala soo xiriir haddii aad xiisaynayso ee wax soo saarka.
Haa, waxaan u baahan tahay oo dhan amarada caalamka in ay leedahay tirada ugu yar ee si joogto ah.
Haa, waxaan heysanaa koox xoog soo koraya. The alaabta iyo xirxirida waxaa la samayn karaa si waafaqsan codsigaaga, sidoo kale awoodo laser aad logo ku saabsan alaabta.
Sida caadiga ah, waxaan heysanaa qaar ka mid ah waxyaabaha in stock, waqtiga dhalmada (ma ku jiraan fasaxa) sida caadiga ah 2-3 maalmood oo shaqo by oogeen / UPS / TNT / EMS. Haddii aad si ka badan 100 nooc, waxay qaadataa 7-10 maalmood si ay u diyaariyaan, marka QTY amarka waa in ka badan 1,000 nooc, waxa ay qaadataa 10-15 maalmood oo ay ku dhameysan wax soo saarka, muddo ka QTY, pls hubi iibka our for dhabta ah
Waxaan damaanad wax soo saarka oo dhammuba aannu marno. Waxaa naga go'an waa in aad ku qanacsan tahay la waxyaabaha our. Haddii ay jiraan wax dhibaato ah oo tayo leh, fadlan noo soo diri sawir ama videos, ka dibna waxaan u falanqeeyaan doonaa sababta oo iska ilaali arrintan mustaqbalka, sidoo kale ka dhigi doonaa bedelka cusub ee aad waayo amarka soo socda.
Cinwaanka: Dehuigangwang Industrial Park, Wanggang Gongye 3aad Rd, degmada Baiyun, Guangzhou
© Copyright - 2010-2018: EKLIGHT dhan Reserved Rights.
EKLIGHT waa soo saaraha xirfadeed ee guluubka nalka hore ee gaari LED, qariyey kit xenon, auto keentay, maalintii socda iftiinka, uu hogaaminayo sumadeeyaha.